Ikea fenicha hacks ine rack kana cannage | Bezzia
Maria vazquez | 10/09/2021 18:00 | Zviite iwe pachako
Mazwi echiRungu anonyanya kuwanda mumutauro wedu mazuva ese. Uye kunyangwe isu tisingazive madudziro mazhinji acho, isu tinokwanisa kuvasanganisa nechero chiitiko. Izvo zvinoitika nezwi rekuti hack, rinobatanidzwa kune vazhinji vane shanduko uye shanduko dzinowanzo gadzirwa nevanhu vanoita mufenicha yeSweden hofori.
Nhasi kune akawanda mazano pamambure ekushandura Ikea fanicha. Mazhinji eaya eIkea fenicha hacks akavakirwa pane yakasarudzika tsika yekushongedza senge cannage mune ino kesi. Uye ndizvozvo midziyo ine wicker grid kana cannageVakave vane fashoni makore angangoita mana apfuura uye havana kurasikirwa nesimba ravo.
1 Maitiro echikafu
2 Ikea fenicha hacks ine cannage
2.1 Ivar wadhirobe
2.2 Billy / Oxberg Chitoro
Isu taizofanira kudzokera ku2017 kunorangarira iyo boom yemidziyo yemidziyo. Zvino, iyo nyika yekushongedza, asi kwete chete iyo nyika yekushongedza, yakanyengedzwazve neyakajairwa, mhizha ... uye mafekitori ekugadzira haana kuzeza kupinza iyi mhando yemidziyo muzvikamu zvavo.
Iyo cannage, sekudanwa kwazvino kuruka maitiro, yakafuridzira akawanda evakagadziri kuti vagadzire akasiyana fenicha kuunganidzwa mumakore apfuura. Uye isu hatisi kushamisika nekuti iyi rattan grid inopa yakasarudzika hunhu uye kudziya kune iyo fanicha.
Rattan kana wicker grids Ivo vakabatawo kutariswa kwemhando dzakasiyana dze DIY. Uye mutengo uyo unogoneka fenicha inowanzoonekwa unoonekwa, vazhinji vakaona murudzi urwu rweprojekti nzira chete yekuisa mumba mavo. Uye ndezvekuti kushanda nekaneti uye kugadzirisa zvinhu izvi nefenicha nemidziyo yemumba kubva pakutanga, zviri nyore, sezvo iwe uchinge uine nguva yekuongorora.
Ikea fenicha hacks ine cannage
Iko kune zvisingaverengeke Ikea fenicha hacks ine cannage. Isu, senguva dzose, takasarudza vatinofarira. Takazviita tichitarisa mutengo wepakutanga weIkea fanicha kuitira kuti vasvike uye kuoma kweprojekti.
Shanda nekenzaSezvatataura, hazvina kuomarara, asi iwe unofanirwa kutora zvinhu zvinoverengeka kana uchizviita. Zvichienderana nekuomarara kwechinhu uye manyorerwo azvinoitwa, zvinogona kufadza kuinyudza mumvura inodziya kuti zvive nyore kutambanudza kana kuenzanisa, sezvaunoda kuidaidza. Uye zvakare, zvichave zvakakosha kuti usarudze yakanamatira yekuchengeta mundangariro - kana uchizoshandisa yekunamatira - uchigara uchifunga mundangariro zvese gridhi uye nepamusoro paunoda kunamatira.
IVAR yekuchengetedza system Izvo zvinoshanda zvekuti yanga ichipindura kune zvakasiyana zvidikanwi zvevatengi veIkea kwemakore makumi mashanu. Huni dzakasimba dzisina kurapwa, yakasimba uye isingagadzirisike zvinhu zvakasikwa iwe zvaunogona kutarisira nekuisa mafuta kana wakisi, iyo Ivar wadhirobe ndeimwe yeakakurumbira mune dzino nhevedzano. Kuyera 80x30x83 cm, ine masherufu maviri aunogona kufamba kuti uchinje nzvimbo kune zvaunoda. Uye zvinongoda chete € 59.
Kugadzirisa ino kabhodhi nekenza iri nyore kwazvo sezvazvinotiratidza Gunyana Gadzirisa mune yako dzidziso. Iye ndiye akatizivisa isu mikana yemubatanidzwa uyu uye akazviita nenzira yakapusa, kunama grid zvakananga pamasuo yemidziyo iyi uye nekuwedzera mamwe anobata. Asi haisiriyo yega mukana kana zvasvika pakushandura wadhirobe iyi sezvaungaona mumufananidzo uri pamusoro; Iwe unogona zvakare kucheka madhoo uye kutsiva chikamu chehuni chembanje, nekudaro uchiwana pfungwa yezviri mukati mekamuri.
Billy / Oxberg Chitoro
Ikea anodaro masekondi mashanu ega ega chitoro chemabhuku chaBilly chinotengeswa kumwe kunhu munyika. Chinhu chinoyemurika tichifunga, pamusoro pezvo, kuti shefu yemabhuku yaBilly yanga iri mubhuku rekambani kubva muna 1979. Nhasi uno iri kuramba iri sarudzo inosarudzwa nevaverengi, asi kwete chete kune vaverengi.
Iyo Billy / Oxberg yekuchengetedza shefu ine magonhi egirazi isarudzo huru yekuwedzera nzvimbo yekuchengetera mudzimba medu. Kuyera 80x30x202 cm, ine mashefu anogadziriswa uye yakakura huremu. Kubatanidza magasi kumikova yegirazi Izvo zvakare zvichave zvakapusa, sezvaungaona muLone Fox vhidhiyo.Vhidhiyo yehutachiona pakati peavo vakatsaurirwa kune Ikea fenicha hacks.
Ehezve kunze kwekutamba uine ruzivo pane iyo grid iwe yaunogona tamba neruvara kuti uwane zvimwe zvinokatyamadza kana zvinowirirana mhedzisiro nekushongedzwa kweimba yako. Shanduko yakapusa mumafuremu emidziyo, inoishandura zvachose. Wakafarira here aya eIkea fenicha hacks? Tsvaga izvi zvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zviite iwe pachako » Ikea fenicha hacks ine rack kana cannage